I-Scorpio Septhemba 2018 I-Horoscope Yanyanga Zonke - Izindatshana Ze-Horoscope
Main Izindatshana Ze-Horoscope I-Scorpio Septhemba 2018 I-Horoscope Yanyanga Zonke
I-Scorpio Septhemba 2018 I-Horoscope Yanyanga Zonke
Kuthiwani uma sikutshela ukuthi uSepthemba yisikhathi esihle sokulula amaphiko akho futhi undize? Ngokuya ngokuthi ubuzizwa kanjani nokuthi ubukade ubhekene nani kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule, uzokhuthazeka kakhulu ukuphokophela phambili noma uzokuthatha lokhu ngokugxeka, njengehlaya elibi.
Yiyo kanye le nkinga obhekene nayo, ubambeke kakhulu kunoma yini eyenzekayo okwamanje, ukuthi ungakwazi ukugxila kulokho ofisa ukuthi izinto zibe khona esikhathini esizayo.
Sebenzisa ushintsho lwezinkathi ukuzama okuthile okusha, noma ngabe kuwushintsho oluncane emqondweni wakho noma isitimela semicabango yansuku zonke.
Uqondiswa kakhulu yinhliziyo yakho kunokuqondisisa kule nyanga ngakho-ke lokhu kusho ukuthi kufanele ulalele umuzwa wakho futhi uzimisele ukuzama lezo zinto ingqondo yakho elokhu ithi cha kuzo, esikhathini esedlule.
Abanye bomdabu bangakuthola kunzima ukusuka esidingweni sokuba necebo langempela futhi bangazabalaza uma kukhulunywa ngemibono engaqondakali.
ukuhambisana komoya nezimpawu zamanzi
Kubukeka sengathi lo Septhemba uzofika nomsebenzi omningi ku Indlu yeshumi nanye , leyo yabangani nezokuxhumana. Ungahle ungafisi ukuba phakathi nendawo ukunakwa kwawo wonke umuntu futhi lokho kulungile, kepha lokhu akufanele kukuvimbe ekuhlanganyeleni, ezingeni eliyisisekelo, nazo zonke izinhlobo zabantu.
ICEBISO ELIPHEZULU lenyanga: Lesi yisikhathi esihle sokulungisa ezinye izinkolelo ngawe futhi ungazizwa ulinganiselwe njengoba kungenzeka uzizwe muva nje. Lokhu akusho ukuthi akufanele ube namaqiniso futhi ulungise okulindelwe ngokufanele, noma kunjalo.
Ngaphansi kwesandla seNyanga eNtsha esenzeka ngomhlaka 9th, uzoba yinkanyezi emsebenzini futhi ube namathuba okujabulisa wonke umuntu ngemibono yakho. Kungenzeka ukuthi usebenza kanzima emuva ukuxhasa lokhu kepha akekho noyedwa ozokwazi ukukuqaphela, ngoba ukwenza konke kubonakale njengomoya.
Le Nyanga kodwa-ke, kungabuye kubuye uhlangothi olumnyama, oluyisici ku-Scorpio, lwezimfihlo hhayi izambulo ezimnandi kangako kepha kufanele ukwazi ukubhekana nazo, njengoba futhi bakushaya.
Isici sezinkanyezi senyanga: I-Jupiter ucansi UPluto kwabangu-12thkumaka ithuba elihle lenhlanhla ezindabeni zezezimali nanoma yini ehlobene nokukhula ngokomoya. Yize izindawo zingabonakala njengokuphikisana okuphelele, labo abakwazi ukuzihlanganisa bazohlomula kakhulu.
Cishe i-18th, ngokuqala kwe ILanga Isihlanganisi I-Mercury , uzoba nentshisekelo enkulu yokuhlaziya konke okushiwo kuwe futhi uzozama ukuxhumanisa amachashazi, noma ngabe akukho lapho kunezincazelo ezifihliwe zokucacisa.
Lesi yisikhathi esihle sokuxhumana kuzinkundla zokuxhumana, ukubhala ama-imeyili nokukhuluma ocingweni, kepha mathupha, ungahle ungazibeki eqophelweni eliphezulu ngoba uzobe ugxile kakhulu ekuhlaziyeni umuntu ophambi kwakho.
Lo Septhemba uzophela ngaphansi kwemibono ethile ethokozisayo yakho, ekhuthazwa yiLanga Mashi trine, isici esikhuthaza ukuzethemba kanye namandla okunqoba noma ibuphi ubunzima bempilo.
Ubonakala umuhle futhi ulusizo impela kulabo abaseduze kwakho. Akusekho ukuvinjelwa okuningi okusele kuwe kepha lokhu akusho ukuthi ngeke ulawule imizwa yakho. Ngokuphambene nalokho, ubeka isimo esiqinisekisayo lapho futhi uzokwazi ukuthola abantu abaseduze kwakho ngoba uvuselela ukuzethemba nokuzola.
Thuthukisa! Amandla akho akhulayo angakusiza futhi endabeni yebhizinisi okungenzeka ukuthi uphelele ngayo ekuvinjelweni komgwaqo ekuqaleni kwenyanga.
Special: Impilo yakho yothando kulo Septhemba
Nge I-Venus kusibonakaliso sakho ukuqala i-9thkaSepthemba, ungaqiniseka ukuthi kuzoba nokunyakaza okuningi empilweni yakho yothando. Amandla akho okukhohlisa akhulisiwe futhi ukuzethemba kwakho nentelezi nakanjani kudlula ophahleni.
Ngakolunye uhlangothi, ungahle uthande ukuqaphela ngoba ungaba isisulu sokulingwa okwesikhashana futhi uma usuvele usebudlelwaneni, lokhu kungahle kungabi nempilo enhle kuwe.
Uzozwa isidingo sokuphunyuka empilweni yakho futhi ufune ukwaneliseka kwenye indawo, okungaholela ekuxabaneni okuthile nomlingani wakho futhi mhlawumbe nokuhlukunyezwa okungatheni ngokomzwelo.
Abomdabu abangashadile, ngosizo lwezinto zokuhamba zakwaMercury, bangakwazi ukuthola isithandwa esifanele phakathi kwabangane babo kodwa kufanele baqaphele ngoba akunakubakhona ukulingwa nephutha eliningi lapho.
Ngasekupheleni kwenyanga ungathola ukuthi udinga ukuxukuza izinto kancane bese nixoxa ngalokho okukuphazamisayo ngoba, ngaphandle kwala magagasi, akukho okuzoshintsha futhi umlingani wakho ngeke aze azi ukuthi awujabule.
Qaphela! Qaphela ngaphambi kokwahlulela izizathu zabo ngoba ungahle umangale ngombono wabo ngezinto bese uzogcina uzizwa kabi kakhulu, sengathi ubacasulile.
Bheka Izibikezelo Eziyinhloko zeScorpio Horoscope 2019
I-Scorpio Januwari 2021 i-Horoscope yanyanga zonke
I-Sagittarius Sun I-Sagittarius Moon: Ubuntu Bokuthanda Inkululeko
Iminyaka eyi-12 (okthoba 6, 2004)
uphawu lwe-horoscope lwangomeyi 21
i-venus endlini yesi-2
umfazi libra ukuphola capricorn indoda
ungayivula kanjani indoda eyi-aries